हात काम्चा: कसरी हल्लाउने हातहरू रोक्न एकलकेयर - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार औषधि जानकारी कम्पनी, औषधि जानकारी मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण समाचार, कल्याण खेलहरु भारी खेल स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय, कम्पनी औषधि बनाम मित्र समाचार
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> हात काम्चा: कसरी हल्लाउने हातहरू रोक्न
हात काम्चा: कसरी हल्लाउने हातहरू रोक्न
के कारण हात काम्छन्? | कसरी हल्लाउने हातहरू रोक्न | औषधिहरू | शल्य चिकित्सा | हात मिलाउँदा डाक्टरलाई कहिले भेट्ने
कम्पोनेन्टहरू अनैच्छिक मांसपेशीय ऐंठन हो जुन शरीरका धेरै क्षेत्रमा पाइन्छ। पिच्छे मांसपेशीहरूले आँखा, खुट्टा, अनुहार, भोकल डोरी, र शरीरका अन्य अंगहरूलाई असर गर्न सक्छ, तर काँप अक्सर हात संग सम्बन्धित छ। हातको कम्पको साथ बाँच्न निराश हुन सक्छ र दैनिक गतिविधिहरू जस्तै खान वा ड्रेसिंग गर्न आफैलाई गाह्रो बनाउँदछ। लगभग संयुक्त राज्य अमेरिकाका १० करोड व्यक्तिहरूले केही हदसम्म कम्पचाहको अनुभव गर्छन् ।
त्यहाँ धेरै किसिमका थरथर काण्डहरू र ती कारणहरू किन हुन्छन्। केहि अस्थायी हुन् र आफ्नै रूपमा जानुहोस्, र अरू धेरै गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरूसँग जोडिएका छन्। के बारे मा अधिक जान्नुहोस् के कारण हातको थरथर काँडा हुन्छ, कसरी हल्लिएको हातहरु लाई रोक्न को लागी, र जब एक हेल्थकेयर प्रोफेशनल बाट हात काँपहरु को बारे मा सल्लाह लिने।
के कम्पन को कारण?
आहार र जीवनशैलीबाट धेरै चीजहरू औषधी र स्वास्थ्य स्थितिको रूपमा परिवर्तनले हातको डरलाई निम्त्याउन सक्छ। बिहान हात हल्लाएको थकान थकाइ वा धेरै क्याफिनको नतिजा हुन सक्छ। बुढेसकालमा मिलाउने भिटामिनको कमी वा औषधि साइड इफेक्टको कारण हुन सक्छ। थरथर काँड, मदिरा फिर्ता, तनाव, चिन्ता, रक्तचाप समस्याहरू, र अन्य स्वास्थ्य अवस्थाको चेतावनी संकेत पनि हुन सक्छ।
हात काम्प का प्रकार
हातको काम्चाको लागि उपचार विकल्पहरू तपाइँसँग कस्तो प्रकारको आधारमा फरक हुन सक्छ। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरले तपाईंलाई कुन निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ हात का कम्पनी को प्रकार तपाईं वा एक प्रियजन छ। यहाँ केहि सामान्य प्रकारका हात काम्चा छन्।
फिजियोलजिक थरथर काँप
एक फिजियोलजिक थरथर एक औषधी का एक साइड इफेक्ट हुन सक्छ। Corticosteroids, amphetamines, र केही दम औषधीहरू अस्थायी हात काम्चाको कारण चिनिन्छ। न्यूरोलॉजिकल र साइकियट्रिक स्थितिको उपचार गर्नको लागि प्रयोग गरिएका औषधीहरूले पनि शारीरिक कंपका उत्पादन गर्न सक्दछन्।
फिजियोलजिक थरथरहरू पनि निम्न लक्षणहरू हुन सक्छन्:
हाइपोग्लाइसीमिया (कम रक्त शर्करा)
ओभरक्टिभ थाइरोइड (हाइपरथायरॉइडिज्म)
पार्किन्सन रोग का कम्पन
धेरै व्यक्ति प्राय जसो हात मिलाउने हात र अंगहरू न्यूरोलॉजिकल डिसअर्डर पार्किन्सन रोगसँग सम्बन्धित गर्छन्। लगभग पार्किन्सनको साथ व्यक्तिहरूको %०% काम्चेरहरू छन्, जुन प्राय: आरामको स्थितिमा हुन्छ (जसलाई आरामको थरथर भनिन्छ)। पार्किन्सनको रोगको साथ विकसित बिरामीहरूलाई निरन्तर र गम्भीर कम्पन हुन सक्छ, जुन दैनिक कार्यहरूमा गम्भीर रूपमा हस्तक्षेप गर्दछ जस्तै खानेकुरा वा तिनीहरूको जुत्ता बांध्नु।
हात ताल र हिलाउँदा आवश्यक काम्चा संग। यद्यपि आवश्यक काम्चा न्यूरोलॉजिकल हो, यो पार्किन्सन रोगसँग सम्भ्रित झुकावहरूको जस्तो कोटीमा छैन। अत्यावश्यक कम्पनिको उपचार गर्न सकिन्छ र कहिलेकाँही अपहेलना योग्य हुन्छ तर उपचार योग्य हुँदैन। चरम तापक्रम, तनाव, चिन्ता, धूम्रपान धूम्रपान, र क्याफिन ट्रिगर र बिरामी डरलाग्दो नराम्रो ।
साइकोजेनिक थरिका प्रायः मनोवैज्ञानिक अवस्थाको परिणाम हो जस्तै तनाव, चिन्ता, आघात, वा साइकियट्रिक डिसअर्डर। ऐंठन र अनैच्छिक शरीर चालन रक्तचाप र तनाव संग सम्बन्धित हृदय दर मा छिटो वृद्धि देखि विकसित गर्न सक्छन्।
मस्तिष्कको सेरिबेलम वा मार्गहरू घाइते वा बिग्रिएको छ भने सेरेबेलर कम्पन हुन सक्छ। यदि मस्तिष्क धमनी बिग्रियो भने स्ट्रोक बिरामीहरूले काँपको विकास गर्न सक्दछन्। ट्यूमर सेरिबेलममा हुने क्षतिको अर्को उदाहरण हो, जसको कारण हात र शरीर काम्चा पैदा हुन्छ।
औषधी जो काँपमा पार्छन्
हात काम्चा सम्भावित साइड इफेक्ट हो असंख्य औषधिहरू । डिप्रेसन, दम, क्यान्सर र एसिड रिफ्लक्सको उपचार गर्न प्रयोग गरिने औषधीहरू धेरै हरूमा हुन् जसले हात हल्लाउने गर्दछन्। केही एन्टिबायोटिकहरू, तौल घटाउने औषधिहरू, र एन्टिवाइरलहरू औषधीहरूको सूचीमा पनि हुन्छन् जुन अस्थायी हातको डरले निम्त्याउन सक्छ।
एसिटामिनोफेन कती समय पछि म ibuprofen लिन सक्छु
एन्टिडेप्रेसन्ट्स र एन्टिसाइकोटिक्स
डिप्रेसनको उपचारमा प्रभावकारी भए पनि, हल्लिएका हातहरू धेरैको साइड इफेक्ट हुन् antidepressants । एन्टिसाइकोटिक औषधिहरूले पनि कम्पनहरू निम्त्याउँदछन् जुन Tardive dyskinesia को रूपमा चिनिन्छ। सामान्य औषधीहरूले समावेश गर्दछ:
Tricyclic antidepressants, जस्तै amitriptyline, doxepin, amoxapine
सेरोटोनिन पुनःअपटेक इनहिबिटरहरू (SSRIs), जस्तै Zoloft, Prozac, Lexapro
मूड स्टेबिलाइजरहरू, जस्तै लिथियम, डेपाकोट, लमिक्टल
दम वा ब्रोन्कोडाइलेटरहरूको साइड इफेक्टले औंलाहरू र हातहरूमा आन्दोलन गडबडी निम्त्याउन सक्छ। प्रिस्क्रिप्शन इनहेलरहरू वा नेबुलाइजरहरू जस्तै प्रोभेन्टिल र भेन्टोलिन (अल्बुटेरोल) ती स्नायु प्रणालीलाई उत्तेजित गर्नेहरूमा हुन्, सम्भावित हिलाहत हातहरूको कारण। हात का कम्पहरू केवल अस्थायी हुन्, औषधी प्रयोग गरेको 30० देखि minutes० मिनेटसम्म र हानिकारक मानिदैन।
एसिड भाटा औषधि
प्रिलोसेक (ओमेप्रजोल) ले पनि हातको कम्पडालाई साइड इफेक्टको रूपमा निम्त्याउन सक्छ। ओमेप्राजोलले भिटामिन बी १२ अवशोषणमा हस्तक्षेप गर्दछ, जुन एक हो आवश्यक भिटामिन स्नायु प्रणाली को लागी। शक्ति ड्रगको उपयोग बन्द गर्न रोकिनु पर्छ।
विरोधी मतली औषधि
Reglan (metoclopramide) का मांसपेशि ऐंठनको सम्भावित साइड इफेक्ट छ, तर तपाईंले आफ्नो हेल्थकेयर प्रोफेशनललाई सूचीत गर्नुपर्दछ यदि तपाईंले यस साइड इफेक्टको अनुभव गर्नुभयो भने। रेग्लानले अन्य औषधीहरूसँग पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दछ (धेरै भन्दा बढि काउन्टर पेन मेड्स पनि), त्यसैले यदि तपाई र अन्य औषधीहरू लिनु भएको छ भने तपाईको डाक्टरलाई भन्नु महत्वपूर्ण छ।
स्वाभाविक अस्थिर हातहरू रोक्न कसरी
हात का कम्पनीहरू कष्टप्रद, अप्ठ्यारो, र तपाईं कसरी बस्नुहुन्छ असर गर्न सक्छ। जीवनशैली परिवर्तन र प्राकृतिक उपचारहरू जस्तै तपाईको खाना, व्यायाम, थेरापी र शल्यक्रियामा पनि परिवर्तन गर्नेहरू हातको थरथर हटाउने विकल्पहरू हुन्। प्राकृतिक घरेलु उपचारले हर्बल हात लक्षणहरूलाई कम गर्न वा हटाउन सक्छ र औषधी वा शल्य चिकित्सा उपचारको आवश्यकता कम गर्न सक्छ।
TO भूमध्य आहार फलफूल र तरकारीहरूले पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, तर यो न्यूरोडोजेनरेसन, अल्जाइमर, र आवश्यक कम्पनहरु । खानामा तरकारी, फलफूल, फलफूल, सम्पूर्ण अनाज अनाज, र असंतृप्त फ्याट्टी एसिडहरू सामेल छन्। माछालाई पनि अनुमति छ, तर कहिलेकाँही पाराले दूषित पनि गर्न सक्दछ, जसले कम्पनलाई झन् नराम्रो बनाउन सक्दछ। एक भूमध्य आहार मा व्यक्ति आफ्नो डेरी, मासु, कुखुरा, र रक्सी खपत सीमित गर्नु पर्छ।
पानी औषधीको अर्को रूप हो। सिफारिस गरिएको पिइन्छ दिनको to देखि cup कप पानी शरीरलाई हाइड्रेटेड राख्नुका साथै शरीरबाट फ्लस विषाक्त पदार्थहरू राख्न सक्दछ जुन हात काम्चामा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।
क्याफिन एक उत्तेजक हो, त्यसैले यसलाई कम गर्न वा यसलाई तपाईंको आहारबाट हटाउनाले पनि हातको थरथर कम गर्न सक्छ। क्याफिन कफी, चिया, सोडास, र अन्य पेय पदार्थ र चकलेटमा छ। यदि तपाईं नियमित रूपमा क्याफिन उपभोग गर्नुहुन्छ र अचानक अचानक रोक्नुभयो भने, तपाईं पनि क्याफिन फिर्तीबाट कम्पनिको अनुभव लिन सक्नुहुनेछ। क्याफिन बन्द गरेपछि, हल्लिएका हातहरू र अन्य फिर्ता लक्षणहरू १० दिनसम्म रहन सक्छ। यस उत्तेजकबाट टाढा हुनु भनेको हातको थरथरबाट जोगिन व्यावहारिक दृष्टिकोण हुन सक्छ।
रक्सी हात कम्पनिको अर्को योगदान कारक हो। उदासिनको रूपमा, रक्सीले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा असर गर्छ। अत्यधिक रक्सी पिएर रक्सी पिउँदा पनि हात मिलाउने कामहरू हुन सक्छ।
स्वस्थ स्नायु प्रणाली कायम राख्न भिटामिन बी १२ आवश्यक छ। भिटामिन बी १२, बी-6, वा बी -१ को अभावले हातको कम्पको विकास निम्त्याउन सक्छ। सिफारिश गरिएको आहार भत्ता (आरडीए) भिटामिनको वयस्कहरूको लागि बी १२ m एमसीजी हो , तर तपाईंलाई अधिक चाहिन सक्छ यदि तपाईंले भिटामिन शोषणमा बाधा पुर्‍याउने औषधि लिनुभयो भने।
भिटामिन बी १२ क्याप्सूल फारममा लिन सकिन्छ, इंजेक्शन, वा दैनिक खानाहरूमा फेला पर्‍यो। अण्डा, दूध, मासु, र प्रायजसो पशु उत्पादहरुमा प्राकृतिक रूप बाट भिटामिन B12 हुन्छ। धेरै अन्नहरू भिटामिनको साथ सुदृढ गरिएको छ।
हात र नाडी व्यायाम
तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईलाई उपचारका लागि शारीरिक वा व्यावसायिक थेरपिस्टमा सिफारिश गर्न सक्दछ वा तपाई घरमा गर्न सक्ने व्यायामको सिफारिश गर्न सक्छन्।
तनाव बल वा हात पकड निचोड दुई देखि १० सेकेन्डको लागि, रिलिजिंग, र प्रत्येक हातमा १० पटक दोहोर्याउनु तपाईंको दिनमा समावेश गर्न सजिलो व्यायाम हुन सक्छ।
कति समय पछि योजना बी काम गर्दछ
नाडी घुमाउँदै गोलाकार चालमा टेन्डन र स्नायुबंधनलाई लचिलो राख्न सकिन्छ। इरादाको साथ हातहरू सार्नाले synovial तरल पदार्थ निर्माण हुनबाट रोक्न सक्छ, जसले थरिका उत्पन्न हुनबाट बचाउँछ वा कम गर्दछ।
हल्का हात तौल कर्लिंग हतियारहरू एक टेबुल मा आराम संग र तपाईंको हत्केलाहरु को अनुहार को सामना गर्न को साथ पनि मद्दत गर्न को लागी सुदृढ पार्न र आफ्नो मांसपेशी नियन्त्रण ठीक गर्न सक्नुहुन्छ।
भारित हात पट्टि
एक भारित पन्जा व्यवसायिक चिकित्सक द्वारा डिजाइन अनुकूलक उपकरणको एक टुक्रा हो। पन्जा बिभिन्न तौलमा आउँछन्। पञ्जाले कम्पनीहरूले कम्पनीहरूलाई हातमा स्थिरता प्रदान गर्दछ र सर्जरीको लागि बिरामीको आवश्यकतालाई कम गर्न सक्छ।
तनाव, चिन्ता, र अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूले हात काम्नेहरू ट्रिगर गर्न सक्दछ। विश्राम गर्ने तरिकाहरू जस्तै: सास फेर्ने व्यायाम, आरामदायी वातावरण सिर्जना गर्ने, योगाभ्यास गर्ने, र ध्यान गर्ने सबै अन्वेषण गर्न लायक छन् यदि तनावले काँपेको कारणले योगदान पुर्‍याउँछ।
मसाज थेरापीले पनि काँढाहरूबाट प्रभावित हातहरूमा मांसपेशीहरू निको पार्न सक्छ जबकि दिमाग र शरीरमा तनाव कम गर्दछ।
थकान कमजोरीको अर्को सामान्य कारण हो किनभने शरीर र स्नायु प्रणालीको सही ढ function्गले काम गर्नको लागि प्रशस्त आराम पाउनु महत्त्वपूर्ण छ। औसत वयस्कलाई लगभग चाहिन्छ सात देखि नौ घण्टा निद्रा ।
कम्पन को लागी औषधि
थरिका विभिन्न औषधिको साथ उपचार योग्य हुन सक्छ। बिटा ब्लकरहरू, एन्टिकोनभल्सेन्ट्स, एन्टेज ضिपेन्ट मेडिसिमेन्ट्स, र अमीनो एसिडहरू हल्का हातहरू कम गर्नका लागि प्रायः सिफारिश गरिएका औषधी हुन्।
%% प्रोजेस्टेरोन क्रीमले एड्रेनालाईन रोक्न सक्छ र हल्का हातहरू घटाउन उपयोगी सहयोगी हुन सक्छ, माइकल ई। प्लाटका अनुसार एमडीका मालिक प्लाट कल्याण केन्द्र र लेखक एड्रेनालाईन वर्चस्व । यो सामयिक समाधान ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) मा उपलब्ध छ र लक्षणहरूलाई कम गर्न हातको छालामा रब्ब गर्न सकिन्छ।
Mysoline ( primidone ) एक सामान्यतया निर्धारित औषधि हो जुन दौरामा उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर यसले हातको थरथर कम गर्न पनि उपयोगी हुन सक्छ। यो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बार्बिटुरेट एन्टिकोनवाल्सेन्ट हो, र यसले मस्तिष्कको विद्युतीय नाडीलाई स्थिर पार्न मद्दत गर्दछ।
लेभोडोपा एक एमिनो एसिड हो जुन शरीरको डोपामाइन आपूर्तिको भरपाईले कम्पन कम गर्न मद्दत गर्दछ। सामान्यतया पार्किन्सन रोगको उपचारमा प्रयोग, लेभोडोपाले अन्य किसिमका कम्पनहरूको उपचार गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। लेभोडोपा लिने व्यक्तिहरूले मासु र फलामको पूरक जस्ता खानाहरूमा पाइने प्रोटीनहरूलाई वेवास्ता गर्नुपर्दछ, किनकि यसले औषधीको अवशोषण कारकलाई घटाउन सक्छ।
बीटा ब्लकरहरू (वा बीटा-एड्रेनर्जिक ब्लकि agents एजेन्टहरू) ब्लक एड्रेनालाईनलाई पनि एपिनेफ्रिन भनेर चिनिन्छ, र रक्तचाप कम गर्दछ। तल्लो रक्तचापले कम्पनिको सुरुवात कम गर्न सक्छ। बीटा ब्लकरहरू जस्तै metoprolol , propranolol , नाडोलोल , वा bisoprolol स्वास्थ्य को मुद्दाहरु को उपचार को लागी, काम्पहरु सहित
निर्धारित बीटा ब्लकरहरूको थप वा यसको सट्टामा, बीटा-एड्रेनर्जिक ब्लकि agents एजेन्टहरू स्वाभाविक रूपमा धेरै खाद्य पदार्थहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। पागल, बीउ, केरा, पातको साग, कुखुरा र मासुले बीटा ब्लकरहरू समावेश गर्दछ। यी खाद्य पदार्थ खाने चिन्ता कम गर्न, समग्र कल्याण गर्न योगदान, र सम्भवतः थरथर कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
हात काँपने को लागी शल्य चिकित्सा
थरथर काँद्ने का केहि मामिलाहरुमा, विशेष गरी आवश्यक काम्चा, शल्य चिकित्सा आवश्यक हुन सक्छ। मस्तिष्कमा न्युरोस्टीमुलेटर घुसाउने एक न्यूनतम आक्रामक प्रक्रिया डिप ब्रेन स्टिभ्युलेसन (DBS) उपलब्ध छ। पेसमेकरसँग समान, न्यूरोस्टीमुलेटर उपकरणले बिजुली पल्स पठाउँदछ जुन कम्पनहरू हुनेबाट रोक्न सक्दछ।
थालमोटोमी आवाश्यक थरिका व्यक्तिहरूको लागि अर्को शल्य चिकित्सा हो। यस विशेष शल्यक्रियाले मस्तिष्कको एक छेउमा थालमससँग हस्तक्षेप गर्दछ। यो शल्यक्रिया प्रायः तपाईको प्रमुख हातको मस्तिष्कको छेउमा गरिन्छ। अपरेशनको नतीजाले प्रभावशाली हातको लक्षणहरूलाई प्रभाव पार्दछ र राहत दिन्छ। शल्यक्रियाका साइड इफेक्टहरू प्रायः अस्थायी हुन्छन् तर भाषण कठिनाइ, भ्रम, र सन्तुलन मुद्दाहरू समावेश गर्दछ।
जब कसैले हात हल्लाएको डाक्टरलाई भेट्नु पर्छ
यदि तपाइँसँग हात काँप छन् भने, चाँडो भन्दा चाँडो व्यावसायिक मद्दत लिनेले गम्भीर मेडिकल अवस्थाको बिग्रिन रोक्न सक्छ। न्युरोलॉजिकल डिसअर्डरहरूको शुरुआत र प्रगति सुस्त पार्ने औषधीहरू तपाईंको कल्याणको प्रबन्ध गर्नको लागि आवश्यक चरण हुनसक्दछ। अर्कोतर्फ, तपाईंको स्वास्थ्यसेवा पेशेवरले तपाईंलाई सूचित गर्न सक्दछ कि तपाईंलाई केवल आफ्नो जीवनमा तनाव कम गर्नुपर्दछ वा डेकमा स्विच गर्न आवश्यक छ। जे भए पनि, तपाईले किन हान्दै काम्दै हुनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउन प्राथमिकता हुनुपर्दछ।
लेक्साप्रो र व्यायाम: एन्टिडेप्रेसन्टहरूमा हुँदा के तपाईं काम गर्न सक्नुहुन्छ?
कसरी पुरानो कब्जियत बाट छुटकारा पाउन
स्याउ साइडर सिरका तपाइँको स्वास्थ्य को लागी के गर्न सक्छ
तपाइँ toenail कवक को लागी के गर्न सक्नुहुन्छ
गर्भावस्था मा तपाइँ कुन दुखाई बाट राहत पाउन सक्नुहुन्छ?
कति समय योजना बी तपाइँको प्रणाली मा रहन्छ
म toenail कवक को लागी के प्रयोग गर्न सक्छु